छोरीलाई जन्म दिएकी लोकप्रिय गायिका शान्तीश्री परियारले अस्पतालबाट यस्ता तस्विर सार्वजनिक गरिन्, हेर्नुहोस् तस्विर – Gazabkonews
छोरीलाई जन्म दिएकी लोकप्रिय गायिका शान्तीश्री परियारले अस्पतालबाट यस्ता तस्विर सार्वजनिक गरिन्, हेर्नुहोस् तस्विर
काठमाडौ – लोकप्रिय गायिका शान्तिश्री परियारले पुत्री लाभ भएको छ ।पारिवारिक स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार उनले आज बिहान छोरीको जन्म दिएकी हुन् ।
छोरी र आमाको स्वस्थ्य अवस्था सामान्य रहेको परिवारले जनाएको छ ।परियारले केही समय पहिला नारायण भुजेल सँग बिहे प्रेम बिहे गरेकी थिइन् ।
शान्ति श्रि परियारको सांगेतिक यात्रा:
रोल्पा जिल्ला बाट गीत गाउनकै लागी भनेर २०६४ सालमा राजधानी छिरेकी शान्तीले आजको स्थान सम्म आइपुग्नको लागी धेरै कठिन मोडहरु पार गर्नु परेको छ । यसो त यो क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नकोे लागी त्यति सहज पनि छैन । आज सम्म करिव २५० भन्दा बढि गीतहरुमा आवाज दिइसक्नु भएकी शान्तीले पहिलो गीत अरु भन्दा फरक म किन भन्ने गीतमा आवाज दिँदा खुसीले आँसुनै आएको थिए । त्यस पछि आजको दिन सम्म शान्तीलाई पछि फर्केर हेर्न परेको छैन ।
यो क्षेत्रमै पहिलो पटक आफ्नो आवाज दिई आधुनिक गीत गाए बावत पाएको पहिलो पारीश्रमीकले आफुलाई खुसिको आँसु आएको र गाएरै जिवन धान्न सकिने हौसला समेत प्राप्त भएको बताउनु हुन्छ । आफु यो क्षेत्रमा प्रवेश गरे सँगै अग्रजकलाकारहरुले गर्नुभएको मायाले गर्दा आफुलाइ स्रोता र दर्शकले गायीका शान्ती श्री परियारको रुपमा नाम दिएको बताउनु हुन्छ । आज भोली देश विदेशमा हुने कार्यक्रममा व्यस्त भइरहने गायीका परियारलाई हामीले उहाँका जिवन भोगाई सँगै गीत संगीतको यात्राका विषयलाई लिएर कुराकानी गरेका छौं प्रस्तुत छ उहाँ सँग गरिएको कुराकानीको संम्पादित अंश ।
शान्ती जी हजुरको नामको पछाडी श्री किन नी ? कुनै राज छ यसको ?
लोकदोहोरी गाउने कलाकारहरुमा धेरै शान्ती हुनुहुन्छ, स्रोता तथा दर्शकलाई यो शान्ती भनेको मनै हो भनेर चिन्न सजिलो होस भनेर आफुलेनै चयन गरेको हो श्री । आफ्नो परिचय अरु भन्दा भिन्न बनाउको लागी मैले नामको पछाडी श्री राखेकी हुँ । यो मेरो बाबुआमाले दिएको श्री चाँही होइन ।
आज भोली दिनहरु कसरी विताइरहनु भएको छ, गीत संगीतको माहोल त त्यति राम्रो छैन भन्छन सबैले ?
त्यति राम्रो नभए पनि स्रोता र दर्शक तथा आयोजकको मायाले म गीत संगीतमा व्यस्तनै छु । देश विदेशमा हुने कार्यक्रममा आयोजकहरुले माया गरेर बोलाइदिनुहुन्छ, स्रोता दर्शकले डिमान्ड गरिदिनुहुन्छ त्यसैमा व्यस्त छु । मेरो नयाँ गीतहरु पनि आइरहेका छन तिनीहरुको प्रचार प्रसार पनि गरिरहेकी छु । रेडियो टेलिभिजनहरुमा सञ्चारकर्मी साथीहरुले अन्तरर्वाताको लागी बोलाउनु हुन्छ । यसैमा व्यस्त छु ।
तपाई जुन पारीवारीका बातावरणबाट यस क्षेत्रमा आउनु भो महिला भएको नाताले र समाजको हेराईको कारणले कत्तीको कठिनाइ भोग्नु भो ?
जुन सुकै क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नको लागी धेरै कठिन छ । त्यस माथी म महिला काठमाण्डौ जस्तो ठाउमा आएर सघर्ष गरि अगाडी बड्नको लागी चुनौतिपुर्णनै छ । म आफुलाई भाग्यमानी कलाकारको रुपमा पनि लिन्छु सुरुका दिनहरुबाटै मेरो आवाज र मेहनतलाई मन पराई शिव हमाल, मिलन लामा लगाएत धेरै अग्रजहरुले मलाई ठुलो सहयोग र हौसला प्रधान गर्नु भयो त्यसैको फल स्वरुप आज म यो स्थानमा छु शान्ती परियार आज शान्ती श्री परियारको रुपमा परिचय बनाउन सफल भएकी छु ।
गीत गाउने र कार्यक्रममा डिमान्ड हुन ,गायीकाहरुको जवानी हुनै पर्ने हो ? उमेर डल्के सँगै सबै मेटीन्छ भन्छ बुझेकाहरु के गीत संगीत जवानीलेनै चलेको हो र ?
विल्कुलै होइन । प्रतिभा नभइकिन जवानी देखाएर मात्र दर्शक खुसि हुन्छन भन्ने मान्यता राख्दिन म त । नयाँ पुस्ताले केहि परिर्वतन चाहेको होलान विगतको तुलनामा तर यसको मतलव यो होइनकी लोकदोहोरीमा उत्ताउलो पन नै चल्छ । अनुशासन,नियम र मर्यादा जुनसुकै क्षेत्रमा हुन्छ हाम्रो यो क्षेत्रमा पनि छ । तर कलाकारहरुलाई अनुशासीत बनाउनको लागी हामी कलाकार र दर्शक स्रोताहरुले पनि आफ्नो ठाउमा अनुशासीत बन्नु जरुरी छ ।
कार्यक्रमा पपुलर भइदैन र प्रशंसकको कमि हुन्छ भनेर प्राय सबै कालाकारहरुले उमेर र बैवाहीक अबस्थाको बारेमा झुट बोल्छन रे, तपाई ति कलाकारहरु मध्यमा पर्नुहुन्छ कि पर्नुहुन्न ?
हा…..हा …..कुनै पनि कलाकारको राम्रो प्रतिभा छ क्षमता छ भने त्यसलाई कुनै पनि कुराले प्रभाव पार्दैन । स्रोता दर्शकले हाम्रो आवाज लाई माया गर्नुहुन्छ हाम्रो उमेर र बैवाहीक अबस्थाले यो क्षेत्रमा त्यस्तो असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
अन्त्यमा के भन्न चाहानुहुन्छ सम्पुर्ण दर्शक र स्रोता साथै हाम्रा पाठकहरुलाई ?
आज सम्म मलाई यो स्थान सम्म ल्याइपुराउनको लागी मलाई जुन रुपले माया गरिरहनु भएको छ त्यो माया मैले निरन्तर पाउने छु भन्ने आशा लिएकी छु ।